Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Luke Shaw Ụmụaka Akụkọ Nke Na-adịghị Ekepụta Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Left Back Genius onye kacha mara amara aha ya; 'Mmadụ Ijeri Dollar isii'. Anyị Luke Shaw Ụmụaka Akụkọ na Iwepụ Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Ihe omumu ya bu ihe omuma nke ndu ya tupu ama aha ya, ndu ezinulo ya, ndu ya na ndi ozo di iche iche banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọsọ ya na ụkwụ aka ekpe ya, ma ole na ole na-ele Luk Shaw's Biography nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Luke Shaw Ụmụaka akụkọ Gụnyere akụkọ na -Ndụ mbido
Luke Paul Hoare Shaw mụrụ na 12th nke July 1995 na Kingston n'elu Thames, United Kingdom.
Ọ na-ekenye ụbọchị ọmụmụ ya James Rodriguez, Brock Lesnar, Malala Yousafzai (Onye Nlekọta Udo Odo), Sundar Pichai (CEO nke Google), na Bill Cosby.
A mụrụ Luke, nne ya, Joanna Shaw na papa, Paul Shaw. N'ịbụ onye toro na Surrey, ọ gara ụlọ ọrụ Rydens Enterprise School na Hersham.
Ịhụnanya ya maka Chelsea FC Gianfranco Zola kpaliri mmasị ya maka football. Little Luke toro dị ka onye na-akwado Chelsea, o kwukwara na ọ bụbu na ọ chọrọ igwu egwu maka ụlọ nzukọ London. N'ezie, o mere mgbalị n'ime ụlọ akwụkwọ ha mgbe ọ dị afọ asatọ. Shaw na-egwuri egwu na ụlọ ọrụ mmepe na Chelsea na Guildford, ma enyeghị ya ebe obibi akwụkwọ.
N'agbanyeghị mmechuihu, Luk ka na-elekwasị anya na football. Ọ nọgidere na-achọ nrọ ya mgbe ọ dị obere. Na 2001, o sonyeere Hersham onye mechara ziga ya Molesey Juniors n'inwe ike ime onwe ya maka nnukwu ụlọ akwụkwọ football. Na 2003, Southampton nyere ya oku. Mgbe o kwusịrị maka ụlọ ọrụ maka 11 afọ (2003-2011 maka agụmakwụkwọ), Luke sonyeere Manchester United na 2014 dị ka nwa agbọghọ dị oké ọnụ ahịa nke ụlọ ahụ zụtara. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Luke Shaw Ụmụaka akụkọ Gụnyere akụkọ na -Ndụ mmekọrịta
Dị ka ọ dị n'oge ederede, Luke adịghị alụ di ma ọ bụ nwunye, ọ na-enwe mmekọrịta ya na enyi nwanyị ọ hụrụ n'anya bụ Shelby Billingham. Di na nwunye na-enwe obi ụtọ na ibe ha na-enwe obi ụtọ na mmekọrịta ha na obi ụtọ.
Luke Shaw na Nwanyị nwanyị, Shelby Billingham
Ma Luke na Shelby kewara ụzọ ozugbo o si London gbaga Manchester. Nke a bụ mgbe ya na enyi nwanyị Anouska Santos malitere mmekọrịta. Ịhụnanya na-eto eto site n'ike ruo n'ike.
N'oge na-adịbeghị anya, a hụrụ na a hapụrụ azụ na-eme otu abalị Christmas ịzụ ahịa na onye òtù ọlụlụ ya. Shaw, yi uwe ojii nile n'igwe iji kpuchie onwe ya site n'oge oyi. Ha abụọ chọsiri ike ileba ụlọ ahịa anya maka onyinye tupu nnukwu ụbọchị.
Luke Shaw na-aga ahịa na enyi ya nwanyị, Anouska Santos.
Ma na-ekpe ikpe site na oge ha nọ na-afụ aka na mgbaaka nke ogwe aka ụlọ ahịa, ha nwere ike na-eme atụmatụ ha ụbọchị pụrụ iche na ọ bụghị dị anya n'ọdịnihu. N'okpuru bụ Luke Shaw na enyi nwanyị ya bụ Anouska Santos na United4Unicef ​​nri abalị.
Luke Shaw na enyi ya, Anouska Santos
Luke Shaw Ụmụaka akụkọ Gụnyere akụkọ na -Ndụ Ezinụlọ
A mụrụ Luk ma ghọọ onye a maara nke ọma oge ezinụlọ nke Kingston Upon Thames United Kingdom. Nke a bụ tupu ịkwụsị ịkwado football maka ụgwọ nwa ha nwoke mbụ.
Ọ bụ nwa na-ahụkarị nke nne na nna ya, n'ihi ya, ọ hụrụ ịhụnanya na nlebara anya site n'aka ezinụlọ ya ọ hụrụ n'anya. Ọzọkwa, ọ na-enyekwa ezinụlọ ya ihe ịga nke ọma. N'okpuru ebe a bụ Mr. Paul Shaw, nwunye ya hụrụ n'anya Joanna Shaw (anya azụ) na ụmụ ha nke gụnyere Luke Shaw.
Papa Luk na nne ya bụ ezigbo ndị nne na nna na-eso ya nọrọ n'ọnọdụ ọ bụla.
Luke Shaw Ụmụaka akụkọ Gụnyere akụkọ na -Luke Shaw Nwanna Vs Mourinho
ONYE nwanna CHINEKE na-agọnahụ na ọ na-agbanye aka Twitter Twitter Jose Mourinho.
Ọ dị ka onye ọhụụ chere na Ben Shaw nwere nkụda mmụọ mgbe Onye Pụrụ Iche hapụrụ nwanne ya nwoke si na ya pụta, nke òtù ya gburu 4 - 0 na Chelsea.
Tupu ọ malite ịkatọ ya Jose Mourinho, Ben pụtara na ọ ga-amasị ụlọ ịgba ahụ nke ọma, sị: "Udo taa Udo."
Otú ọ dị, ihe gbanwere ngwa ngwa dịka e kwupụtara ọkwa ndị ahụ na Shaw kwụsịrị, ya na Ben kwuru na o dere ihe ndị na-esonụ na mgbasa ozi ọha na eze.
Iwe Benny na Jose Mourinho
Luke Shaw ama okụt ke ini enye okokụtde utịt Jose Mourinho iwe nke mere ka a daa ya n'òtù ya. Jose mgbe otutu mmadu katuru Shaw ruo n'ókè nke na agbawara ndi isi United n'enye ndi nkasi obi aka.
Mmekọrịta Jose Mourinho na Luke Shaw
Luke Shaw Ụmụaka akụkọ Gụnyere akụkọ na -Agbapu Agbapu Agba
Luke Shaw nwere ahụhụ nke a na-apụghị ịkọwa atụ nke mgbaji ụkwụ abụọ na-agba egwu na Njikọ asọmpi na PSV.
Ihe na-erughị minit 15 n'ime egwuregwu ahụ, azụ azụ azụ na-akwụ ụgwọ n'ime mpaghara ikpe mmegide mgbe Hector Moreno, onye na-agbachitere PSV ahụ, kpachapụrụ anya n'ime ya.
Luke Shaw Ụmụaka akụkọ Gụnyere akụkọ na -Personality
Danny Rose bụ Ọrịa cancer ma nwee àgwà na-esonụ na àgwà ya.
Ike Luke Shaw: Ezi uche, nke na-eche echiche nke ọma, onye na-eguzosi ike n'ihe, nke mmetụta uche, nke nwere ọmịiko na nke na-eme ka obi sie gị ike.
Ahụhụ Luk Shaw: Mgbaghara, enweghị nchekwube, enyo enyo, nchebe na enweghị nchebe.
Ihe Luke Shaw nwere mmasị: Art, ihe omume ntụrụndụ nke ebe obibi, izu ike nso ma ọ bụ na mmiri, na-enyere ndị a hụrụ n'anya, ezigbo nri na ndị enyi.
Ihe Luke Shaw na-achọghị: Ndị mbịarambịa, nkatọ ọ bụla nke mama na-ekpughe ndụ onwe onye.
Luke Shaw Ụmụaka akụkọ Gụnyere akụkọ na -Ihe mere n'aha aha
Anyanwụ mgbe a kọchara ha na ha nwere ndị òtù United Player aha ya bụ Luke Shaw 'Mmadụ Ijeri Mmadụ Iri Abụọ'. Nke a bụ n'ihi na o nwere okwukwe yiri nke ahụ na steeti Steve Austin bụ onye merụrụ ahụ nke ukwuu mgbe ohere ya gbaruru.
Luk na-enwekwa ihe ijuanya na-agbaji agbagha n'oge Njikọ Champions League megide PSV Eindhoven.
Luke Shaw Ụmụaka akụkọ Gụnyere akụkọ na -Ihe Mgbochi Mkpagbu
Luk Shaw na-atụnyere onye Manchester Manchester nke dịpụrụ adịpụ bụ Patrice Evra na-adabere na onye kachasị ịlụ ọgụ. Ee, Evra nwetara aha dị ka onye na-awakpo wingback MA ndị stats na-atụ aro na Shaw ka mma.
Eziokwu gosiri Luke Shaw bụ onye agha karịa agha Evra
Dị ka ọnụ ọgụgụ dị, nwa na-eto eto mere 141 ka ọ gafee ndị ya na 35 Premier Njikọ - karịa Evra jisiri ike - ma nwee ihe ịga nke ọma 56% mgbe ọ na-anwa ịba ụda.
Luke Shaw Ụmụaka akụkọ Gụnyere akụkọ na -Paul Amaghị Ihe Obi Ụtọ
Otu nwoke Shaw kabeghị mmasị ruo oge bụ Paul Scholes. Onye na-egwu egwu Manchester United na-enwe mgbe niile kụrụ na ọnụahịa aha ụlọ mbụ ya akwụ ụgwọ maka onye ahụ na-agbachitere ma kwuo na Red Devils kwesịrị ịbanye aka onye na-egbu egbu kama. Ndị ọkà mmụta, bụ ndị mere 718 ngosipụta zuru ezu maka United n'ime ọrụ 20 na-egbuke egbuke, kwuru na nso nso a na ha na-ekwu na nde 30 + a gbara na Shaw bụ "Nzuzu".
Paul Scholes anaghị anabata Luke Shaw
N'okwu ya ..."Maka aka ekpe na-efu £ 34 na-egosi otú nzuzu egwuregwu ahụ sila. Maka nke ahụ ego, Achọrọ m ka ndị na-aga n'ihu na-aga akara 30 akara oge "
Luke Shaw Ụmụaka akụkọ Gụnyere akụkọ na -Onye iro ya kacha njọ
Luke Shaw abịawo megide ụfọdụ n'ime ndị iro kachasị egwu. Mmasị nke Eden Hazard, Daniel Sturridge na Wilfried Zaha, Luis Suarez niile elu elu.
Ma ònye bụ onye iro ya kacha atụ egwu? Mba, ọ bụghị Suarez, mara maka ndị na - akwado ndị na - emegide onwe ha. Ọ bụ Victor Moses. Mgbe a jụrụ ya na nso nso Twitter Q & A bụ onye onye iro ya kasị atụ ụjọ, kpakpando ahụ zara, ma eleghị anya ihe ijuanya:
"Nke ahụ bụ ihe siri ike mana m ga-aga Victor Moses, n'ezie n'ihi na ya ijere na ike. Ọ na-esiri m ike ịnwale ọnwụnwa siri ike. "
Luke Shaw Ụmụaka akụkọ Gụnyere akụkọ na -Ọdịnihu ndị na-eto eto
N'agbanyeghị na ọ bụ onye na-agbachitere mmadụ nke anọ, ọ na-adọta ụgwọ ọrụ nke gburugburu £ 100,000-a-izu, ndị na-egwu egwuregwu na ndị na-akwado ya ekwesịghị ịtụ anya ka Luke Shaw na-ebu ụgbọala ụgbọ ala.
Nke a abụghị n'ihi na ọ gaghị enwe ike ịzụta otu - ụgwọ ọrụ ya na United mere ka ọ bụrụ otu n'ime ndị nọ n'afọ iri na ụma kacha nwee mmasị na ụwa.
N'oge ahụ, ọ bụ n'ihi na ọ kafebeghị ule ugbua ya. Ọ bụ oge dịka nke a ị na-echeta otú nwa okorobịa Shaw dị n'oge ahụ.
Ọ bụ naanị 18 mgbe ọ sonyere United. Tupu ya abanye, ya na ndị mụrụ ya ka nọ. Ndị mụrụ ya na-amanyekarị ya ịkụzi na igwu egwuregwu. Nke a bụ ọbụna tupu ọ gaa maka 2014 World Cup. Shaw weghaara ugbua ugbua, nke bu ugbua mgbe obosara nke 2014 World cup no. Nke a bụ mgbalị iji mechaa nweta ikikere ya. Ntughari ya site na nwa okoro bara ọgaranya rue onye okenye bu n'ezie ihe ọzọ.
Daalụ maka ịgụ Danny Rose's Childhood Story tinyere akụkọ eziokwu dị oke ọnụ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
James Ward-Prowse Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ